Phenylephrine बनाम pseudoephedrine: मतभेद, समानता, र जुन राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समाचार कम्पनी, समाचार भारी खेल चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कम्पनी समाचार, कल्याण स्वास्थ्य समुदाय कम्पनी, चेकआउट मनोरञ्जन खेलहरु औषधि बनाम मित्र
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Phenylephrine बनाम pseudoephedrine: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Phenylephrine बनाम pseudoephedrine: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
नाकको भीड र साइनस प्रेशरमा धेरै योगदान पुर्‍याउने कारकहरू छन्, विशेष रूपमा मौसमी एलर्जी राइनाइटिस र सामान्य चिसो। नाक र साइनसको दबाबले नाक श्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ, टाउको दुख्ने निम्त्याउँछ, र उत्पादकता घटाउँछ। Phenylephrine (Sudafed PE) र pseudoephedrine (Sudafed) दुई प्रकारको डिकोन्जेन्ट्स हुन् जुन साइनसको दबाब कम गर्न प्रभावकारी हुन सक्छन्। यी औषधीहरूले नाकको परिच्छेद, साथ ही शरीरको अन्य भागहरूमा सिधा उत्तेजित पार्ने कार्य गर्दछ। जबकि ती केहि तरीकाहरूमा समान छन्, त्यहाँ केहि मुख्य भिन्नताहरू छन् जुन कुनले तपाईंको लागि सही डिकन्जेस्टन्ट हो भनेर निर्धारण गर्न सक्छ।
फिनिलिफ्रेन र स्यूडोफेड्रिन बीचका मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
Phenylephrine (Phenylephrine के हो?) आफु बाट वा एक प्रकारको संयोजन चिसो र फ्लू उत्पादहरु को एक मा उपलब्ध एक नाक decongestant हो। यो ओभर-द-काउन्टर (OTC) मा उपलब्ध छ, र खरीद जानकारीको प्रिस्क्रिप्सन वा लगिंग आवश्यक पर्दैन। Phenylephrine एक शक्तिशाली अल्फा- adrenergic एगोनिस्ट हो र वस्तुतः कुनै बीटा-एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट गतिविधि छैन। अल्फा-एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, जब उत्तेजित हुन्छ, रक्त वाहिकाहरूको संकुचनको लागि जिम्मेवार हुन्छ। बीटा-एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, जब उत्तेजित हुन्छ, रक्त नलीहरूको आरामको लागि जिम्मेवार हुन्छ, र यसले मुटुको दरमा वृद्धि पनि गर्छ। जबकि यसले नाकको मार्गमा केही vasoconstriction पैदा गर्दछ जसले साइनस प्रेशरलाई कम गर्दछ, यसले शरीरभरि भासकोण्ट्रिकसन पनि गर्दछ जसले रक्तचाप बढाउन सक्दछ। Phenylephrine मौखिक तयारीमा ट्याब्लेट वा तरलको रूपमा, साथै एक ईन्जेक्शन समाधानको रूपमा उपलब्ध छ। इंजेक्शन समाधान एक स्वास्थ्य सेवा सेटिंग मा मात्र प्रशासित हुनेछ।
स्यूडोएफेड्रिन (स्यूडोफेड्रिन भनेको के हो?) नाक नाघ्ने औषधी हो जुन आफै आफैंमा वा विभिन्न प्रकारका संयोजन चिसो र फ्लू उत्पादहरूमा पनि उपलब्ध हुन्छ। यो पर्चे बिना नै उपलब्ध छ, तर यसको खरीद फरक डिग्रीहरूमा प्रतिबन्धित छ। प्रत्येक राज्य, संघीय दिशानिर्देशहरूको संयोजनमा, आफ्ना उपभोक्ताहरूको लागि खरीद सीमा निर्धारण गर्दछ। स्यूडोफेड्रिनको खरीद फार्मेसी काउन्टरमा अवस्थित फार्मासिष्टको साथ हुनुपर्दछ र डाटाबेसमा लगइन गर्नुपर्दछ। यी प्रतिबन्धहरू अब अवस्थित छन् किनभने स्यूडोफेड्रिन मेथाम्फेटामाइनको अवैध निर्माणको प्रमुख घटक हो।
स्यूडोएफेड्रिनले नाक म्यूकोसामा अल्फा-एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, साथै बिटा-एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्सलाई शरीरभरि उत्तेजित गर्दछ। यसले नाक बिग्रन र ब्रोन्कियल आराम गर्नेतर्फ अग्रसर गर्दछ, तर बढेको मुटुको दर र संकुचनको कारण पनि हुन्छ। यो मौखिक तयारीमा ट्याब्लेट वा तरलको रूपमा, साथै एउटा ईन्जेक्शन समाधानको रूपमा उपलब्ध छ। इंजेक्शन समाधान एक स्वास्थ्य सेवा सेटिंग मा मात्र प्रशासित हुनेछ।
फिनिलिफ्रेन र स्यूडोफेड्रिन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग Alpha-adrenergic एगोनिस्ट अल्फा-एड्रेनर्जिक र बीटा-एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति उपलब्ध ब्रान्ड र जेनेरिक उपलब्ध ब्रान्ड र जेनेरिक
ब्रान्ड नाम के हो? Sudafed पीई Sudafed
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? तत्काल रिलीज ट्याब्लेट, मौखिक तरल तत्काल रिलीज ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेट, मौखिक तरल
मानक खुराक के हो? १० मिलीग्राम प्रत्येक hours घण्टा Mg० मिलीग्राम प्रत्येक to देखि hours घण्टा
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? लक्षण राहत नभएसम्म छोटो अवधि लक्षण राहत नभएसम्म छोटो अवधि
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? बच्चाहरू १२ बर्ष र माथिका, वयस्कहरू बच्चाहरू years बर्ष र माथिका, वयस्कहरू
शर्तहरू फिनिलिफ्रेन बनाम स्यूडोफेड्रिन द्वारा उपचार
सदमा वा एनेस्थेसिया सम्बन्धी परिस्थितिमा हाइपोटेंशन, वा धेरै कम रक्तचापको उपचार गर्न अनुमोदित फिनिलिफ्रेनको एक प्रकारको इंजेक्शन हुन्छ। यो खुराक सामान्यतया एक स्वास्थ्यसेवा सेटिंग मा एक इंजेक्शन को रूप मा प्रशासित छ जहाँ एक बिरामी एक चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु द्वारा अनुगमन गरीरहेको छ। यो एफडीए स्वीकृति बिना, अफ-लेबल पनि इस्कीमिक प्रिआइपिज्म (पुरुषहरूमा निर्माण जुन लामो समयसम्म चलेको छ) को उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। फेनिलफ्रिनको ओभर-द-काउन्टर डोज फारम नाक डिकन्जेन्टन्टको रूपमा प्रयोग हुन्छ।
स्यूडोएफेड्रिन नाकको भीडको उपचारको लागि अनुमोदित छ।
तपाइँ claritin र benadryl पछि लिन सक्नुहुन्छ
सर्त Phenylephrine स्यूडोफेड्रिन
हाइपोन्शन हो हैन
इस्केमिक प्रियापिजम अफ-लेबल हैन
नाकको भीड हो हो
के फेनिलीफ्रिन वा स्यूडोफेड्रिन बढी प्रभावकारी छ?
एक समय, स्यूडोफेड्रिन बजारमा अनिवार्य रूपमा एक मात्र नाक डिन्जेजेन्ट थियो। जे होस्, जब उत्पादनको बिक्री प्रतिबन्धित हुन थाल्यो, निर्माताहरूले उनीहरूको उत्पादनहरूलाई अर्को सक्रिय पदार्थको साथ सुधार गर्न खोज्दछन् जसले गर्दा तिनीहरू पसलको तखतामा सजिलैसँग खरीद गर्न सक्दछन्। Phenylephrine त्यसपछि फार्मेसी काउन्टर जाने बिना खरीद गर्न सकिन्छ कि उत्पादनहरु मा फेला पर्दछ मौखिक डिकन्जेस्टन्ट बन्नुभयो आफ्नो खरीद फार्मासिष्ट द्वारा लग इन गर्न।
फेनिलेफ्राइनको बढ्दो प्रयोगले अनुसन्धानकर्ताहरुलाई मूल्यांकन गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो कि यदि यसको विनिमय प्रभाव स्यूडोफेड्रिनको जत्तिकै शक्तिशाली थियो भने। एक अनियमित मा, प्लेसबो-नियन्त्रित अध्ययन , मौसमी एलर्जी राइनाइटिस भएका बिरामीहरूलाई भियना चुनौती च्याम्बरमा घाँस परागकणको सामना गरियो। उनीहरूले या त फेनिलाफ्रिन, स्यूडोफेड्रिन, वा प्लेसबो प्राप्त गरे उनीहरूको कन्जेसिटिव लक्षणहरू कम गर्न। अध्ययनले निष्कर्ष निकाल्यो कि त्यहाँ फेनिलेफ्राइन र प्लेसबोबीच कुनै खास फरक छैन। जे होस्, स्यूडोएफेड्रिनले दुबै प्लेसबो र फेनिलफ्रिनको तुलनामा नाकको डिन्जेसनमा उल्लेखनीय भिन्नता प्रदान गर्‍यो। यी परिणामहरूले सुझाव दिन्छ कि स्यूडोफेड्रिन उच्च नाकको डिजेन्जेन्ट छ।
केही अनुसन्धानकर्ताहरुसँग छ चिन्ता व्यक्त हाम्रो pseudoephedrine को बिक्री प्रतिबन्धित द्वारा methmphetamine को निर्माण कम गर्न को इच्छा को लागी एक ठाउँमा एक हीन उत्पादन (phenylephrine) यसको ठाउँमा व्यापक प्रयोग भइरहेको छ।
धेरै पटक, रनाइटिस र साइनस प्रेशरको उपचार बढी प्रभावकारी हुन सक्छ यदि अन्य एजेन्टहरू संयोजनको रूपमा प्रयोग गरियो। उदाहरणका लागि एन्टिहिस्टामाइन्सले बलगमको उत्पादनलाई सुस्त बनाउँदछ र नाक डिसेन्जेन्ट्सको प्रभाव बढाउन सक्छ।
कभरेज र फिनाइलिफ्रेन बनाम स्यूडोफेड्रिनको लागत तुलना
यसको मौखिक, over-the-काउन्टर फारम मा Phenylephrine एक पर्ची आवश्यक छैन। यो मेडिकेयर वा अन्य वाणिज्य बीमा योजनाहरू द्वारा कभर गरिएको छैन। Sudafed PE को लागी औसत लागत $ $ $ around को आसपास हो जब ओभर-द-काउन्टर खरीद गरियो, तर यदि तपाइँको डाक्टरले एक प्रिस्क्रिप्शन लेख्दछ भने, तपाइँ फार्मेसीमा सिंगलकेयरबाट कूपनको साथ $9as low मा कम भर्नुहुनेछ।
स्यूडोफेड्रिन, फार्मेसीमा खरीद गर्न प्रतिबन्धित भए पनि, ओटीसी औषधि पनि हो। यदि तपाइँको डाक्टरले pseudoephedrine को लागी एक प्रिस्क्रिप्शन लेख्छ भने, तपाईले उनीहरुले तोईएको मात्रा प्राप्त गर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ यदि यो ओभर-द-काउन्टर खरीदको लागि राज्य सीमा भन्दा उच्च छ भने पनि।
स्यूडोफेड्रिन सामान्यतया मेडिकेयर वा अन्य वाणिज्यिक बीमा योजनाहरू द्वारा कभर हुँदैन, यद्यपि केही प्रिस्क्रिप्शन लेखिएको छ भने केही चयन हुन सक्छ। २ tablets ट्याब्लेट सुदाफेड 30० मिलीग्रामको औसत लागत $ $ $ $ १० देखि जब ओभर-द-काउन्टर खरीद गरियो यदि तपाइँको डाक्टरले प्रिस्क्रिप्शन लेख्यो भने तपाई फार्मेसीमा जेनेरिक २. fill fill डलर कममा सिंगलकेयरबाट कूपनको साथ भर्न सक्नुहुन्छ। ।
मानक खुराक १,, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू २,, mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
एकलकेयर लागत + + + $ २- $।
फिनिलिफ्राइन बनाम स्यूडोएफेड्रिनको साधारण साइड इफेक्टहरू
Phenylephrine र pseudoephedrine दुबै adrenergic एगोनिस्टहरू हुन् र केहि समान साइड इफेक्टहरू छन्, यद्यपि अल्फा- र बीटा-एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्सहरूको सम्बन्धमा तिनीहरूको भिन्नता केही भिन्नताहरूको लागि जिम्मेवार छ।
Phenylephrine र pseudoephedrine चिन्ता, चक्कर, टाउको दुख्ने, अनिद्रा, घबराहट, र बेचैनी को कारण ज्ञात छ। थप रूपमा, pseudoephedrine टाकीकार्डिया, धमकी, अतालता, धमिलो दर्शन, र एनोरेक्सिया को कारण कागजात गरिएको छ। यी साइड इफेक्टहरू कत्ति पटक आउन सक्छन् भनेर परिभाषित गर्न गाह्रो छ।
उच्च रक्तचाप वा अन्य ज्ञात ह्रदयको स्थिति भएका बिरामीहरूले चिकित्सकको निर्देशन बिना स्यूडोफेड्रिन प्रयोग गर्नु हुँदैन।
निम्न तालिका साइड इफेक्टको पूर्ण सूची हुन अभिप्रेरित छैन। पूर्ण सूचीका लागि तपाईले फार्मासिष्ट वा अन्य स्वास्थ्य सेवाको सल्लाह लिनु पर्छ।
चिन्ता हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
नर्भस हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
बेचैनी हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
टाचिकार्डिया हैन परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
धमकी हैन परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
कार्डियाक एरिथमियास हैन परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
धमिलो दृष्टि हैन परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
एनोरेक्सी हैन परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
मुहान: डेलीमेड (फेनिलेफ्रिन) डेलीमेड (स्यूडोफेड्रिन)
फिनिलिफ्राइन बनाम स्यूडोफेड्रिनको ड्रग अन्तर्क्रिया
Phenylephrine र pseudoephedrine सँग अल्फा र बीटा रिसेप्टर्समा उनीहरूको एड्रेनर्जिक प्रभावहरूको कारण धेरै समान ड्रग अन्तर्क्रिया प्रोफाइल छ। अल्फा-ब्लकरहरू, जस्तै तामसुलोसिन, दुबै डिकन्जेन्ट्सको भासोनक्स्ट्रिक्टिभ गुणहरूलाई कम गर्न सक्छ तिनीहरूलाई कम प्रभावकारी बनाउने।
एमएओ अवरोधकर्ताहरू, जस्तै सेगिलिन, र एर्गट डेरिवेटिवहरू, जस्तै ब्रोमोक्रिप्टिनले, डिकन्जेन्ट्सको उच्च रक्तचाप प्रभाव बढाउन सक्छ। यो पूर्व-अवस्थित उच्च रक्तचापको साथ कसैको सम्बन्धमा हुने छ जसले डिकोन्जेन्ट प्रयोगमा विचार गर्दैछ। फिनालीफ्रिन वा स्यूडोफेड्रिनको संयोजन या त MAA अवरोधकर्ताहरू वा एर्गट डेरिवेटिवहरूसँग contraindication हो।
के तपाइँ azithromycin लिँदा बियर पिउन सक्नुहुन्छ
निम्नलिखित सूची सबै सम्भावित ड्रग अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची हुनु हुँदैन। पूर्ण सूची र अधिक जानकारीको लागि कृपया तपाईंको फार्मासिष्ट वा चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास Phenylephrine स्यूडोफेड्रिन
तामसुलोसिन अल्फा -१ ब्लकरहरू हो हो
नाडोलोल बीटा ब्लकरहरू हो हो
ब्रोमोक्रिप्टिन अर्गोट एल्कालोइड्स हो हो
रिजर्पाइन Antihypertensives हो हो
Norepinephrine पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू हो हो
Phenylephrine बनाम pseudoephedrine को चेतावनी
Phenylephrine र pseudoephedrine एक पर्ची बिना नै उपलब्ध छन् र सामान्यतया सुरक्षित औषधि को रूप मा मानिन्छ। कार्डियक प्रणालीमा उनीहरूको प्रभावका कारण उच्च रक्तचाप र हृदय रोग भएका बिरामीहरूले आफ्नो चिकित्सकको स्पष्ट सहमति बिना यी औषधिहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। यी औषधिहरू तीव्र राइनाइटिस र साइनस प्रेशरको राहतको लागि छोटो अवधिमा प्रयोगको लागि हो। यी लक्षणहरू बिरामीहरू जसले सात दिन भन्दा लामो समयसम्म अनुभव गर्छन्, वा जो ज्वरो बढ्छन्, एक चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्छ।
Phenylephrine मा छ गर्भावस्था कोटि सी यसको मतलब पशुहरूमा अध्ययनले भ्रुणमा प्रतिकूल प्रभाव देखायो। जब औषधि C कोटि कोटि हो, त्यहाँ केहि परिस्थितिहरू हुन सक्दछ जहाँ गर्भवती बिरामीलाई हुने जोखिम जोखिमभन्दा बढी हुन्छ, र फिनिलिफ्रिन तपाईंको चिकित्सकको सहमति बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। स्यूडोफेड्रिन गर्भावस्था कोटि B हो जसको मतलब पशुको अध्ययनले भ्रुणमा प्रतिकूल प्रभाव देखाएको छैन। स्यूडोफेड्रिनलाई सुरक्षित लिन मानिन्छ जब तपाइँको चिकित्सकसँग परामर्श गरेपछि गर्भवती हुन्छ। स्यूडोफेड्रिन तथापि, पहिलो त्रैमासिकमा टाढा रहनु पर्छ।
फेनिलफ्रिन र स्यूडोफेड्रिनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
फेनिलेफ्राइन भनेको के हो?
Phenylephrine एक over-the-काउंटर नाक डन्जेजेस्टन्ट हो जुन mg मिलीग्राम र १० मिलीग्राम ट्याब्लेटमा उपलब्ध छ, साथ साथै मौखिक समाधान। यो एक इंजेक्शन योग्य फारममा पनि उपलब्ध छ जुन केवल कम रक्तचापको लागि चिकित्सा पेशेवरहरू द्वारा इनप्यान्ट सेटिंगमा प्रयोग गरिन्छ। Phenylephrine खरीददारको जानकारी को कुनै प्रतिबन्ध वा लगिंग बिना खरीद गर्न सकिन्छ।
स्यूडोफेड्रिन भनेको के हो?
स्यूडोफेड्रिन over० मिलीग्राम र mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटमा, साथै १२० मिलीग्राम र २0० मिलीग्राम विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेटहरूमा उपलब्ध एक ओभर-द-काउन्टर नाक डिन्जेजेन्ट हो। यो मौखिक समाधानको रूपमा पनि उपलब्ध छ। स्यूडोफेड्रिन खरीद फार्मेसीमा हुनुपर्दछ र खरीद जानकारी डाटाबेसमा लगइन गर्नुपर्दछ। खरीद सीमा राज्य र संघीय दिशानिर्देशहरू द्वारा सेट गरिएको छ।
के फेनिलीफ्रिन वा स्यूडोफेड्रिन एकै हो?
Phenylephrine र pseudoephedrine दुबै adrenergic एगोनिस्ट हुन्। Phenylephrine मुख्यतया मात्र अल्फा-एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को लागी एक लगाव छ, जबकि pseudoephedrine दुबै अल्फा- र बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को लागी एक सम्बन्ध छ। उनीहरूको साइड इफेक्ट प्रोफाइलहरू समान समान छन्।
के फिनिलफ्रिन वा स्यूडोफेड्रिन राम्रो छ?
अध्ययनहरूले देखाए कि स्यूडोएफेड्रिन फेनिलेफ्राइन भन्दा बढी प्रभावकारी डेन्जेन्जेन्ट हो। Phenylephrine का डिकन्जेन्ट्स प्रभावहरू एक प्लेसबोको भन्दा फरक नहुन सक्छ। दुबै औषधि को प्रभाव रन्थोटाइटिस लाई प्रभावित पार्ने अन्य उत्पादनहरु को एक साथ प्रयोग संग वृद्धि हुन सक्छ, जस्तै एन्टीहिस्टामाइन्स।
aleve को लागी सामान्य नाम के हो
के म गर्भवती हुँदा फेनिलेफ्रिन वा स्यूडोफेड्रिन प्रयोग गर्न सक्छु?
Phenylephrine गर्भवती हुँदा प्रयोग गर्नु हुँदैन जबसम्म आमालाई हुने लाभ जोखिमलाई भन्दा बढि बनाउँछ। स्यूडोफेड्रिन पहिलो त्रैमासिक पछि लिन सुरक्षित मानिन्छ। जहिले पनि गर्भवती नाकमा डिन्जेन्जेन्ट लिनु भन्दा पहिले आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
के म रक्सीको साथ फेनिलेफ्रीन वा स्यूडोफेड्रिन प्रयोग गर्न सक्छु?
Phenylephrine र pseudoephedrine सुरक्षित हुन्छ यदि मदिरा सेवन गर्दछ।
के फेनिलीफ्रिन एक उत्तेजक हो?
Phenylephrine अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स उत्तेजित गर्दछ जो केन्द्रीय स्नायु प्रणाली उत्तेजक प्रभावहरू जस्तै बेचैनी, चिन्ता, र अनिद्राको लागि जिम्मेवार बनाउन सक्छ। यो सोइड गरिएको छ कि यसले प्रभावहरूलाई सिउडोफेड्रिनले गर्ने हदसम्म नहुन सक्छ।
कसले फेनिलफ्रिन लिनु हुँदैन?
उच्च रक्तचाप, पहिले अवस्थित हृदय रोग, वा अन्य हृदय सर्तहरू भएका बिरामीहरूले फिनिलफ्रिन लिनु हुँदैन उनीहरूको चिकित्सकको स्वीकृति बिना। त्यहाँ वैकल्पिक डिकोन्जेन्ट विकल्पहरू छन्, जस्तै नाक स्प्रेहरू, जुन यो जनसंख्यामा अधिक उपयुक्त हुन सक्छ। महिला जो गर्भवती छन् फेनीलेफ्रिन प्रयोग गर्नु अघि चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्छ।
के फेनिलीफ्रिन एक राम्रो डिकन्जेस्टन्ट हो?
अध्ययनहरूले देखाए कि फेनिलेफ्राइन एक साना, वा कम प्रभावकारी, स्यूडोफेड्रिन भन्दा डेकोजेन्टेन्ट हो। वास्तवमा, यसले प्लेसबोको भन्दा कुनै फाइदा लिन सक्दैन।
जहाँ बीमा बिना जन्म नियन्त्रण प्राप्त गर्न को लागी
काउन्टर वा नुस्खा मा imodium छ
कसरी न nail कवक बाट छुटकारा पाउन
सुक्खा खोकी को लागी सबै भन्दा राम्रो कफ सिरप के हो
कस्ता प्रकारको दुखाईको औषधि म गर्भवती हुँदा लिन सक्छु